ငရဲပြည်​မှာ အမှုထမ်းရ​သော ယမမင်း အ​ကြောင်း - APANNPYAY
Home / ဗဟုသုတအစုံ / ငရဲပြည်​မှာ အမှုထမ်းရ​သော ယမမင်း အ​ကြောင်း
ငရဲပြည်​မှာ အမှုထမ်းရ​သော ယမမင်း အ​ကြောင်း
Apann Pyay 11:24 PM ဗဟုသုတအစုံ Edit
ငရဲဘုံရှိ ယမမင်း( ငရဲမင်း ) ဆိုတာ ဘုရားဟော ဟုတ်မဟုတ် နှင့် ယမမင်းနှင့် ငရဲထိန်းတို့သည် အဘယ့်ကြောင့် ငရဲပြည်မှာ အမှုထမ်းရသနည်း ?
ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ လူတစ်ယောက် သေလွန်ပြီးနောက်ထိုလူ သွားရောက် ရမည့် ဘဝကို မေးမြန်းစစ်ဆေးပြီးဆုံးဖြတ်ပေးသည့် ယမမင်း ဆိုသည်ကို ကြားဖူးပါသည်။
ယမမင်း ဘယ်နှစ်ယောက် ရှိသလဲ။ဘယ်မှာ နေသလဲ။ဘယ်လို ကုသိုလ် သို့မဟုတ် အကုသိုလ်ကြောင့်ယမမင်း ဖြစ်ရသလဲ။
ယမမင်းဆိုတာကိုဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့ နှုတ်တော်မှ ဟောကြားခဲ့သလားဆိုသည်တို့ကို သိလိုပါသည်ဘုရား။
ယမမင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ကျမ်းဂန်ထွက် ဗဟုသုတအဖြာဖြာကို မျက်မှောက်ခေတ် အမြင်နှင့်ရောစပ်၍ ဖြေကြားပေးစေချင် ပါသည်ဘုရား။
“ရဟန်းတို့၊ ငါဘုရားသည် ဒိဗ္ဗစက္ခုညာဏ်ဖြင့်ငရဲသို့ကျ ရောက်သော သတ္တဝါတို့ကို မြင်တော်မူ၏။
လူ့ဘဝတွင် မကောင်းမှုကို ပြုသောကြောင့်ငရဲသို့ရောက် လာသူအား ငရဲထိန်းတို့ကယမမင်းထံ ခေါ်သွား၏။
ထိုအခါ ယမမင်းက သင်သည် လူ့ဘဝမှာရှိစဉ်-
“မွေးဖွားခြင်း၊ အိုခြင်း၊ နာခြင်း၊ (အဓမ္မမှုကြောင့်)လောကပြစ်ခံ ရခြင်း နှင့် သေခြင်း” ဟူသောနတ်တမန် ငါးယောက်တို့ ရောက်လာသည် ကိုသတိပြုမိပြီး ကောင်းမှုတွေ ပြုခဲ့ရဲ့လောဟု စစ်မေး၏။
မပြုမိပါဟု ဖြေခြင်း၌ ယမမင်းက သင်သည်မေ့လျော့ပြီး ကောင်းမှုကို မပြုဘဲ မကောင်းမှုကို ပြုခဲ့ပြီ။ သင်ပြုလုပ်သည့် အကုသိုလ်မှုကို မည်သူ မျှ အစားခံလို့မရ။ သင်သာလျှင် ခံရလိမ့်မည်ဟု ဆိုပြီး ဆိတ်ဆိတ်နေ၏။
ယင်းနောက် ငရဲထိန်းတို့သည် ထိုသူအား တံခါး လေးခု ရှိသည့် မဟာငရဲသို့ ပို့လိုက်ကြ၏။ ထိုသူ သည် အကုသိုလ်ကံ၏ အကျိုးပေး မကုန်သရွေ့
ထိုငရဲ၌ ခံနေရ၏ (မ ၃၊ ၁၈၆)”။
“ယမမင်းဟူသည် (စတုမာရာဇ် နတ်မျိုးဝင်) ဝေမာနိကမျိုး ပြိတ္တာမင်း ဖြစ်၏။
တစ်ချိန်မှာ နတ်ဗိမာန်၌ စည်းစိမ် ခံစားရပြီး၊ တစ်ခါတစ်ရံမှာ မကောင်းကျိုး ခံစားရ၏။ တရားစောင့်သော မင်းဖြစ်၏။(ငရဲဘုံဝင်ပေါက်) ဂိတ်လေးခုတွင် ယမမင်း တစ်ယောက်စီ ရှိ၏ (မ-ဋ္ဌ ၄၊ ၁၈၃)”။
(ဥပမာ ဝက်သတ်ပြီး အလှူပေးခြင်း စသည်)ကြောင့်ယမမင်း ဖြစ်ရ၏။ သို့ရာတွင် ယမမင်းသည် တရား အားထုတ်ပါက မဂ်ဖိုလ်ကို ရနိုင်၏
(အံ-ဋီ ၂၊ ၁၁၄)”။
“သိကြားမင်း၏ ဝရဇိန်လက်နက်၊ အာဠာဝကဘီလူး၏ ဘွဲ့ဖြူလက်နက်၊
ဝေဿ ဝဏ်နတ်မင်း၏ သန်လျက်လက်နက်၊ ယမမင်း၏ (ဒေါသဖြင့်ကြည့် လျှင်ပြာကျစေနိုင်သော)မျက်လုံးလက်နက်ဟု လက်နက်ကြီး လေးမျိုးရှိ၏”။
(သံ-ဋ္ဌ ၁၊ ၂၉၀)
“သမ္ပယာတောသိ ယမဿ သန္တိကန္တိ မရဏမုခံဂန္တုံ သဇ္ဇော ဟုတွာ ဌိတောသီတိ အတ္ထော
(ဓမ္မပဒ-ဋ္ဌ ၂၊ ၂၁၉)”
အဖွင့်အရဆိုရင် ယမမင်းဆိုတာ သေမင်းလို့အဓိပ္ပာယ် ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘဝသံသရာမှမလွတ်မြောက်သေးသမျှ ယမမင်းရဲ့အာဏာစက်ကွင်းမှ မလွတ်သေးဘူး။ ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့ ယမမင်းကို“ဝေသာယီ”
(ဇာ-ဋ္ဌ ၂၊ ၂၈၈) လို့လည်း နာမည်တစ်မျိုးနဲ့ ခေါ်ပါတယ်။ ငရဲဘုံနဲ့ ယမမင်း ဆိုတာ ဘုရားဟောပါ။
ယမရာဇသုတ် (အံ ၁၊ ၁၄၀)အရ ယမမင်းဟာအကုသိုလ်မှု ကြောင့် ငရဲသို့ ရောက်လာသူတွေကို ကြည့်ရင်း “ငါသည် လူ့ဘဝကိုရပြီး ဗုဒ္ဓ ဘုရားရှင် ပွင့်ခိုက်နှင့် ကြုံကြိုက်သဖြင့် ဗုဒ္ဓတရားကို ကြားနာရလို့
တရားထူး ကိုရရင် သိပ်ကောင်း မှာပဲလို့” အကြံ ဖြစ်ပေါ်ဖူးပါသတဲ့။ အဲဒီလို ယမမင်းအကြံ ဖြစ်တာကို ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဟာ သူများ အပြောကြောင့် သိတာ မဟုတ်ဘဲကိုယ်တိုင် (သဗ္ဗညုတညဏ်နဲ့) သိမြင်ပြီး မြွှက်ဆိုတာဖြစ်တယ် လို့လည်း အဲဒီသုတ်မှာ မိန့်ပါတယ်။
(စပ်မိလို့ အသိပေးပါတယ်။ ဆရာကြီး ဂိုအင်ဂါအဖွဲ့ကထုတ်တဲ့ ပိဋကတ် စီဒီရွမ်မှာ ယမရာဇသုတ်ကို ဒေဝဒူတသုတ်နှင့် ပေါင်းထားပြီး စတုမဟာရာဇသုတ်ရဲ့နောက်ပိုင်းကို ဒုတိယ စတုမဟာရာဇသုတ်လို့
စဉ်ထားတာ တွေ့ရလို့ ဆဋ္ဌမူနဲ့ မတူကြောင်းပါ။ပညာရှင်တို့ ဆင်ခြင်ပါကုန်)။
ငရဲဘုံ၌ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုများ ရှိသောကြောင့်နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းသူ ငရဲထိန်းများ ရှိ၏
(အဘိ ၄၊ ၄၃၀)။
ငရဲထိန်းများကို ငရဲသားတို့က ပြန်ပြီး နှိပ်စက်က လူမပြုနိုင် (သံ-ဋီ ၂၊ ၈၆)။
ငရဲထိန်းများလည်း ယမမင်းနှင့် အမျိုးဇာတ်တူ၏။ ငရဲမီးဟူသည် ကံကြောင့် ဖြစ်သော ဥတုဇရုပ်ဖြစ်၍ ငရဲခံရမည့်သူများ သာပူပြီး ငရဲထိန်းများမှာမူ ပူလောင်ခြင်း မရှိ။ အကုသိုလ် နည်းနည်းဖြင့် ငရဲသို့ ရောက်လာ သူများကိုသာ စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်၏
မူရင်း ပါဠိတော်နှင့် အဋ္ဌကထာကျမ်းတွေမှာ ငရဲဘုံအမျိုးမျိုးနှင့် ဘုံအလိုက် သက်တမ်း အပိုင်း အခြားတွေကိုဖော်ပြထားတာတွေ
ရှိပါတယ်။ အဲဒီငရဲဘုံတွေဟာ အချို့ လူသားတို့ အနီးမှာ (ဥပမာ လောဟကုမ္ဘီငရဲ)၊ အချို့ မဟာပထဝီ မြေကြီးထဲမှာ၊ အချို့ အာကာသ တစ်နေရာမှာ ရှိတယ်လို့ အဲဒီကျမ်းဂန်ဖော်ပြချက်တွေအရ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
“ငရဲထိန်း၊ ငရဲခွေး၊ ငရဲကျီးတို့သည် သက်ရှိသတ္တဝါများ ဖြစ်ကြ၏။ စတုမဟာရာဇ် နတ်မျိုးဖြစ်သော ဘီလူးများသည်
အတိတ်ဘဝ၌ ကုသိုလ်နှင့်အကုသိုလ် ရောနှော ပြုခဲ့သောကြောင့် ငရဲပြည်၌ နတ်ကြမ်း၊ ဘီးလူးကြမ်းများဖြစ်၍ ငရဲသူ ငရဲသားတို့ကိုနှိပ်စက်ကုန်၏ (ကထာဝတ္ထု၊ နိရယပါလကထာ)”။
မန်လည်ဆရာတော်ကြီးက ငရဲထိန်းကို ရက္ခသ(ရက္ခိသ်) မျိုးဟု ဆိုပြီး ဤသို့ သရုပ်ဖော်သည် ...
“မျက်စိကြော့သွေး၊ တွေးတွေးနီမြန်း ကြောင်သန်းတျာတျာ၊ လွန်စွာကျယ်ဘိ
လူပြည်ယှိသား၊ မောင်းကြီ့းအယောင်မျက်တောင်မညိတ်၊ နက်ရောင် ဘိတ်လျက် သပိတ်လုံးနှယ်၊ မျက်လုံးကျယ်နှင့် အစွယ်ပြူးပြူး၊
ငှက်ပျောဖူးသို့ မာန်ရှူးလွန်ဆိုး၊ ရက္ခိသ်မျိုးသည်၊ အုပ်စိုး ကွပ်ကွပ် မှူးမှူးတည်း။
ထူးခြားတာက ဗုဒ္ဓဝါဒမှာ ဘယ်တော့မှ ပြန်ပေါ် မလာနိုင်တော့တဲ့ “ထာဝရငရဲ” ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ငရဲဆိုတာ ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ အကုသိုလ်ကြောင့် ယာယီဖြစ်ရတဲ့ ဘဝတစ်ခုသာ ဖြစ်ပြီး ငရဲကနေ လူ့ဘဝ နတ်ဘဝတွေ ကို ပြန်ရောက်လာပြီး တရားအားထုတ်လို့ ဗောဓိဉာဏ် ကိုတောင်ရနိုင်ပါသေး တယ်။
ဒါဟာ ခွင့်လွှတ်ခြင်း၊ မတည်မြဲခြင်းဆိုတဲ့ အနှစ်သာရတွေ ကိန်းနေတဲ့ အင်မတန် လှပတဲ့ ဗုဒ္ဓဒဿ နပါပဲ။
သိပ္ပံ ဆရာတွေကတော့ Indian Mythology(အိန္ဒိယဒဏ္ဍာရီ)လို့ ဆိုကြမှာပဲ။ ဆိုခွင့်ရှိပါတယ်။ဒါပေမယ့် ယခု ရာစုနှစ်တွေမှာ သိပ္ပံဆရာတွေက ပဲအာကာသ မှာ သက်ရှိလောက ရှိနိုင်တယ်လို့ ဆိုလာကြတယ်။
သိပ္ပံ ဆရာတို့က ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာ နေထက်တောင် ပူနိုင်တဲ့
အရည်ရှိတယ်လို့လဲ ဆိုတယ်။ဒီတော့ “အရည်ရှိတဲ့ နေရာတိုင်းမှာ သက်ရှိသတ္တဝါ ရှိတယ်” ဆိုတဲ့ သိပ္ပံနိယာမရယ် ၊ရေဆူမှတ် နီးနီးပူနေ တဲ့ ရေပူစမ်းထဲမှာ ငါးလေးတွေ အသက်ရှင်နေနိုင်တာရယ် တွေကြောင့် အနှီ မြေကြီးထဲက အပူရည်မှာ အကုသိုလ်ကြောင့် ဖြစ်ရတဲ့ သက်ရှိလောက တစ်ခု မရှိဘူးလို့ ဘယ်သူဆိုနိုင်မလဲ။
တရားထိုင်သူတွေ အနည်းဆုံး အလင်းနိမိတ် လောက်ကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ရဖူးရင် ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ရဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုဉာဏ် စွမ်းအင်ကို ခန့်မှန်း နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဗုဒ္ဓဝါဒီ တစ်ယောက် အနေနဲ့ ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ရဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခု ဉာဏ်စွမ်းအားကို သိပ္ပံဆရာတို့ရဲ့ အသိဉာဏ် နှင့် မနှိုင်းယှဉ်ရဲပါ။
-ဆရာတော်အရှင်ကေလာသ ၏ “ဓမ္မအမေးအဖြေများ”မှ -ကောက်နှုတ် ကူးယူပူဇော်မျှဝေပါသည်။
ငရဲဘုံရှိ ယမမငျး( ငရဲမငျး ) ဆိုတာ ဘုရားဟော ဟုတျမဟုတျ နှငျ့ ယမမငျးနှငျ့ ငရဲထိနျးတို့သညျ အဘယျ့ကွောငျ့ ငရဲပွညျမှာ အမှုထမျးရသနညျး ?
ဗုဒ်ဓဘာသာမှာ လူတဈယောကျ သလှေနျပွီးနောကျထိုလူ သှားရောကျ ရမညျ့ ဘဝကို မေးမွနျးစဈဆေးပွီးဆုံးဖွတျပေးသညျ့ ယမမငျး ဆိုသညျကို ကွားဖူးပါသညျ။
ယမမငျး ဘယျနှဈယောကျ ရှိသလဲ။ဘယျမှာ နသေလဲ။ဘယျလို ကုသိုလျ သို့မဟုတျ အကုသိုလျကွောငျ့ယမမငျး ဖွဈရသလဲ။
ယမမငျးဆိုတာကိုဗုဒ်ဓဘုရားရှငျရဲ့ နှုတျတျောမှ ဟောကွားခဲ့သလားဆိုသညျတို့ကို သိလိုပါသညျဘုရား။
ယမမငျးနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ကမျြးဂနျထှကျ ဗဟုသုတအဖွာဖွာကို မကျြမှောကျခတျေ အမွငျနှငျ့ရောစပျ၍ ဖွကွေားပေးစခေငျြ ပါသညျဘုရား။
“ရဟနျးတို့၊ ငါဘုရားသညျ ဒိဗ်ဗစက်ခုညာဏျဖွငျ့ငရဲသို့ကြ ရောကျသော သတ်တဝါတို့ကို မွငျတျောမူ၏။
လူ့ဘဝတှငျ မကောငျးမှုကို ပွုသောကွောငျ့ငရဲသို့ရောကျ လာသူအား ငရဲထိနျးတို့ကယမမငျးထံ ချေါသှား၏။
ထိုအခါ ယမမငျးက သငျသညျ လူ့ဘဝမှာရှိစဉျ-
“မှေးဖှားခွငျး၊ အိုခွငျး၊ နာခွငျး၊ (အဓမ်မမှုကွောငျ့)လောကပွဈခံ ရခွငျး နှငျ့ သခွေငျး” ဟူသောနတျတမနျ ငါးယောကျတို့ ရောကျလာသညျ ကိုသတိပွုမိပွီး ကောငျးမှုတှေ ပွုခဲ့ရဲ့လောဟု စဈမေး၏။
မပွုမိပါဟု ဖွခွေငျး၌ ယမမငျးက သငျသညျမလြေ့ော့ပွီး ကောငျးမှုကို မပွုဘဲ မကောငျးမှုကို ပွုခဲ့ပွီ။ သငျပွုလုပျသညျ့ အကုသိုလျမှုကို မညျသူ မြှ အစားခံလို့မရ။ သငျသာလြှငျ ခံရလိမျ့မညျဟု ဆိုပွီး ဆိတျဆိတျနေ၏။
ယငျးနောကျ ငရဲထိနျးတို့သညျ ထိုသူအား တံခါး လေးခု ရှိသညျ့ မဟာငရဲသို့ ပို့လိုကျကွ၏။ ထိုသူ သညျ အကုသိုလျကံ၏ အကြိုးပေး မကုနျသရှေ့
ထိုငရဲ၌ ခံနရေ၏ (မ ၃၊ ၁၈၆)”။
“ယမမငျးဟူသညျ (စတုမာရာဇျ နတျမြိုးဝငျ) ဝမောနိကမြိုး ပွိတ်တာမငျး ဖွဈ၏။
တဈခြိနျမှာ နတျဗိမာနျ၌ စညျးစိမျ ခံစားရပွီး၊ တဈခါတဈရံမှာ မကောငျးကြိုး ခံစားရ၏။ တရားစောငျ့သော မငျးဖွဈ၏။(ငရဲဘုံဝငျပေါကျ) ဂိတျလေးခုတှငျ ယမမငျး တဈယောကျစီ ရှိ၏ (မ-ဋ်ဌ ၄၊ ၁၈၃)”။
(ဥပမာ ဝကျသတျပွီး အလှူပေးခွငျး စသညျ)ကွောငျ့ယမမငျး ဖွဈရ၏။ သို့ရာတှငျ ယမမငျးသညျ တရား အားထုတျပါက မဂျဖိုလျကို ရနိုငျ၏
“သိကွားမငျး၏ ဝရဇိနျလကျနကျ၊ အာဠာဝကဘီလူး၏ ဘှဲ့ဖွူလကျနကျ၊
ဝေဿ ဝဏျနတျမငျး၏ သနျလကျြလကျနကျ၊ ယမမငျး၏ (ဒေါသဖွငျ့ကွညျ့ လြှငျပွာကစြနေိုငျသော)မကျြလုံးလကျနကျဟု လကျနကျကွီး လေးမြိုးရှိ၏”။
(သံ-ဋ်ဌ ၁၊ ၂၉၀)
“သမ်ပယာတောသိ ယမဿ သန်တိကန်တိ မရဏမုခံဂန်တုံ သဇ်ဇော ဟုတှာ ဌိတောသီတိ အတ်ထော
(ဓမ်မပဒ-ဋ်ဌ ၂၊ ၂၁၉)”
အဖှငျ့အရဆိုရငျ ယမမငျးဆိုတာ သမေငျးလို့အဓိပ်ပာယျ ရပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဘဝသံသရာမှမလှတျမွောကျသေးသမြှ ယမမငျးရဲ့အာဏာစကျကှငျးမှ မလှတျသေးဘူး။ ဒီအဓိပ်ပာယျနဲ့ ယမမငျးကို“ဝသောယီ”
(ဇာ-ဋ်ဌ ၂၊ ၂၈၈) လို့လညျး နာမညျတဈမြိုးနဲ့ ချေါပါတယျ။ ငရဲဘုံနဲ့ ယမမငျး ဆိုတာ ဘုရားဟောပါ။
ယမရာဇသုတျ (အံ ၁၊ ၁၄၀)အရ ယမမငျးဟာအကုသိုလျမှု ကွောငျ့ ငရဲသို့ ရောကျလာသူတှကေို ကွညျ့ရငျး “ငါသညျ လူ့ဘဝကိုရပွီး ဗုဒ်ဓ ဘုရားရှငျ ပှငျ့ခိုကျနှငျ့ ကွုံကွိုကျသဖွငျ့ ဗုဒ်ဓတရားကို ကွားနာရလို့
တရားထူး ကိုရရငျ သိပျကောငျး မှာပဲလို့” အကွံ ဖွဈပျေါဖူးပါသတဲ့။ အဲဒီလို ယမမငျးအကွံ ဖွဈတာကို ဗုဒ်ဓဘုရားရှငျဟာ သူမြား အပွောကွောငျ့ သိတာ မဟုတျဘဲကိုယျတိုငျ (သဗ်ဗညုတညဏျနဲ့) သိမွငျပွီး မွှကျဆိုတာဖွဈတယျ လို့လညျး အဲဒီသုတျမှာ မိနျ့ပါတယျ။
(စပျမိလို့ အသိပေးပါတယျ။ ဆရာကွီး ဂိုအငျဂါအဖှဲ့ကထုတျတဲ့ ပိဋကတျ စီဒီရှမျမှာ ယမရာဇသုတျကို ဒဝေဒူတသုတျနှငျ့ ပေါငျးထားပွီး စတုမဟာရာဇသုတျရဲ့နောကျပိုငျးကို ဒုတိယ စတုမဟာရာဇသုတျလို့
စဉျထားတာ တှရေ့လို့ ဆဋ်ဌမူနဲ့ မတူကွောငျးပါ။ပညာရှငျတို့ ဆငျခွငျပါကုနျ)။
ငရဲဘုံ၌ နှိပျစကျညှဉျးပနျးမှုမြား ရှိသောကွောငျ့နှိပျစကျညှဉျးပနျးသူ ငရဲထိနျးမြား ရှိ၏
ငရဲထိနျးမြားကို ငရဲသားတို့က ပွနျပွီး နှိပျစကျက လူမပွုနိုငျ (သံ-ဋီ ၂၊ ၈၆)။
ငရဲထိနျးမြားလညျး ယမမငျးနှငျ့ အမြိုးဇာတျတူ၏။ ငရဲမီးဟူသညျ ကံကွောငျ့ ဖွဈသော ဥတုဇရုပျဖွဈ၍ ငရဲခံရမညျ့သူမြား သာပူပွီး ငရဲထိနျးမြားမှာမူ ပူလောငျခွငျး မရှိ။ အကုသိုလျ နညျးနညျးဖွငျ့ ငရဲသို့ ရောကျလာ သူမြားကိုသာ စဈဆေးခွငျးဖွဈ၏
မူရငျး ပါဠိတျောနှငျ့ အဋ်ဌကထာကမျြးတှမှော ငရဲဘုံအမြိုးမြိုးနှငျ့ ဘုံအလိုကျ သကျတမျး အပိုငျး အခွားတှကေိုဖျောပွထားတာတှေ
ရှိပါတယျ။ အဲဒီငရဲဘုံတှဟော အခြို့ လူသားတို့ အနီးမှာ (ဥပမာ လောဟကုမ်ဘီငရဲ)၊ အခြို့ မဟာပထဝီ မွကွေီးထဲမှာ၊ အခြို့ အာကာသ တဈနရောမှာ ရှိတယျလို့ အဲဒီကမျြးဂနျဖျောပွခကျြတှအေရ ဆိုနိုငျပါတယျ။
“ငရဲထိနျး၊ ငရဲခှေး၊ ငရဲကြီးတို့သညျ သကျရှိသတ်တဝါမြား ဖွဈကွ၏။ စတုမဟာရာဇျ နတျမြိုးဖွဈသော ဘီလူးမြားသညျ
အတိတျဘဝ၌ ကုသိုလျနှငျ့အကုသိုလျ ရောနှော ပွုခဲ့သောကွောငျ့ ငရဲပွညျ၌ နတျကွမျး၊ ဘီးလူးကွမျးမြားဖွဈ၍ ငရဲသူ ငရဲသားတို့ကိုနှိပျစကျကုနျ၏ (ကထာဝတ်ထု၊ နိရယပါလကထာ)”။
မနျလညျဆရာတျောကွီးက ငရဲထိနျးကို ရက်ခသ(ရက်ခိသျ) မြိုးဟု ဆိုပွီး ဤသို့ သရုပျဖျောသညျ ...
“မကျြစိကွော့သှေး၊ တှေးတှေးနီမွနျး ကွောငျသနျးတြာတြာ၊ လှနျစှာကယျြဘိ
လူပွညျယှိသား၊ မောငျးကွီ့းအယောငျမကျြတောငျမညိတျ၊ နကျရောငျ ဘိတျလကျြ သပိတျလုံးနှယျ၊ မကျြလုံးကယျြနှငျ့ အစှယျပွူးပွူး၊
ငှကျပြောဖူးသို့ မာနျရှူးလှနျဆိုး၊ ရက်ခိသျမြိုးသညျ၊ အုပျစိုး ကှပျကှပျ မှူးမှူးတညျး။
ထူးခွားတာက ဗုဒ်ဓဝါဒမှာ ဘယျတော့မှ ပွနျပျေါ မလာနိုငျတော့တဲ့ “ထာဝရငရဲ” ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ငရဲဆိုတာ ကိုယျလုပျခဲ့တဲ့ အကုသိုလျကွောငျ့ ယာယီဖွဈရတဲ့ ဘဝတဈခုသာ ဖွဈပွီး ငရဲကနေ လူ့ဘဝ နတျဘဝတှေ ကို ပွနျရောကျလာပွီး တရားအားထုတျလို့ ဗောဓိဉာဏျ ကိုတောငျရနိုငျပါသေး တယျ။
ဒါဟာ ခှငျ့လှတျခွငျး၊ မတညျမွဲခွငျးဆိုတဲ့ အနှဈသာရတှေ ကိနျးနတေဲ့ အငျမတနျ လှပတဲ့ ဗုဒ်ဓဒဿ နပါပဲ။
သိပ်ပံ ဆရာတှကေတော့ Indian Mythology(အိန်ဒိယဒဏ်ဍာရီ)လို့ ဆိုကွမှာပဲ။ ဆိုခှငျ့ရှိပါတယျ။ဒါပမေယျ့ ယခု ရာစုနှဈတှမှော သိပ်ပံဆရာတှကေ ပဲအာကာသ မှာ သကျရှိလောက ရှိနိုငျတယျလို့ ဆိုလာကွတယျ။
သိပ်ပံ ဆရာတို့က ကမ်ဘာမွကွေီးရဲ့အတှငျးပိုငျးမှာ နထေကျတောငျ ပူနိုငျတဲ့
အရညျရှိတယျလို့လဲ ဆိုတယျ။ဒီတော့ “အရညျရှိတဲ့ နရောတိုငျးမှာ သကျရှိသတ်တဝါ ရှိတယျ” ဆိုတဲ့ သိပ်ပံနိယာမရယျ ၊ရဆေူမှတျ နီးနီးပူနေ တဲ့ ရပေူစမျးထဲမှာ ငါးလေးတှေ အသကျရှငျနနေိုငျတာရယျ တှကွေောငျ့ အနှီ မွကွေီးထဲက အပူရညျမှာ အကုသိုလျကွောငျ့ ဖွဈရတဲ့ သကျရှိလောက တဈခု မရှိဘူးလို့ ဘယျသူဆိုနိုငျမလဲ။
တရားထိုငျသူတှေ အနညျးဆုံး အလငျးနိမိတျ လောကျကို ပိုငျပိုငျနိုငျနိုငျ ရဖူးရငျ ဗုဒ်ဓရှငျတျောမွတျရဲ့ဒိဗ်ဗစက်ခုဉာဏျ စှမျးအငျကို ခနျ့မှနျး နိုငျပါလိမျ့မယျ။
ဗုဒ်ဓဝါဒီ တဈယောကျ အနနေဲ့ ဗုဒ်ဓရှငျတျောမွတျရဲ့ဒိဗ်ဗစက်ခု ဉာဏျစှမျးအားကို သိပ်ပံဆရာတို့ရဲ့ အသိဉာဏျ နှငျ့ မနှိုငျးယှဉျရဲပါ။
-ဆရာတျောအရှငျကလောသ ၏ “ဓမ်မအမေးအဖွမြေား”မှ -ကောကျနှုတျ ကူးယူပူဇျောမြှဝပေါသညျ။